Wasiirka Amniga Galmudug oo Baarlamaanka horgeeyay hindise-sharciyeedka dhismaha ciidanka Booliska – Kalfadhi
October 15, 2020 October 15, 2020 Hassan Istiila
Wasiirka Wasaaradda Amniga Gudaha ee maamulka Galmudug ayaa xildhibaannada ka hor akhriyay hindise-sharciyeedka dhismaha ciidanka Booliska maamulkaasi.
Wasiirka ayaa sheegay in sharcigan meel-marintiisa uu muhiim u yahay in dowlad-gobolleedka Galmudug ay dhanka amniga isku filnaato.
Mudane Axmed Macalim Fiqi ayaa xusay qodobka 69aad ee Dastuurka uu u oggolaanayo in “Dawladda Galmudug ay yeelato ciidamo nabadgalyo oo isugu jira: Booliis iyo Birmad, Nabadsugid iyo Ciidamada Asluubta”.
24 Juun, 2016 waxaa magaalada Baydhabo ka dhacay heshiis dhex maray dawladda federaalka ah iyo maamul-gobolleedyada, heshiiskaasi oo dhigaya in lagu jaan-gooyo qaab-dhismeedka ay yeelanayaan ciidamada Booliska Soomaaliyeed laba heer oo kala ah heer federaal iyo heer dawlad goboleed.
Maamul-gobolleed walbana uu yeelanayo sharci Booliis oo u gaar ah, kan heer federaal ahna laga ansixinayo Barlamaanka federaalka, kan heer dawlad goboleedna laga ansixinayo Barlamaanada dawlad goboleedyada”
Goorma ayuu furmayaa Kalfadhiga 47aad ee Baarlamaanka Puntland?